म्यानेजमेण्ट कलेजका उत्पादनहरू सबै रोजगार | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा म्यानेजमेण्ट कलेजका उत्पादनहरू सबै रोजगार
नेपालमै पहिलोपटक पोखरामा स्थापना भएको नेपाल टुरिजम एण्ड होटल म्यानेजमेण्ट कलेजका करीब ९९ प्रतिशत विद्यार्थीले रोजगारी पाउन सफल भएका छन् । नेपालमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ सकेर पनि हजारौं युवा बेरोजगारीको समस्याले पिरोलिएका छन् । सन् १९९९ मा पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा पोखरा–१८ छिनेडाँडामा स्थापना भएको होटल म्यानेजमेण्ट कलेजले हालसम्म करीब ४ सय विद्यार्थीलाई ब्याचलर अफ होटल म्यानेजमेण्ट (बीएचएम) कोर्स पूरा गराउन सफल भएको छ ।
कलेजले सन् २००२ बाट हालसम्म १० ओटा ब्याच उत्पादन गरिसकेको छ । अध्ययनपछि विद्यार्थीहरू पोखरा, काठमाडौंलगायत नेपाली शहरबाहेक अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, साइप्रस, नेदरल्याण्ड, स्पेन, जापान, हङकङ, सिङ्गापुर, अष्ट्रेलिया, भारतलगायत देशमा जाने गरेका छन् । अध्ययनकै क्रममा रहेका विद्यार्थीको पनि स्वदेश तथा विदेशमा उत्तिकै माग रहेको कलेजका अध्यक्ष अशोक पालिखेले बताए । आफ्नो कलेजमा अध्ययन गरेर विदेश गएका विद्यार्थीले मासिक रू. २ लाखसम्म कमाउने गरेको उनको दाबी छ ।
अब बीएचएम कोर्स पूरा गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता नरहेको पालिखेको भनाइ छ । नाफाभन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनु र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु कलेजको उद्देश्य भएको उनले बताए । उक्त कोर्स पूरा गर्न भारतमा करीब रू. २० लाख लाग्ने र यूरोपेली मुलुकमा करीब रू. ३० लाख लाग्छ । तर, पोखरामा आफूहरूले रू. ३ लाख ५० हजारमै उक्त कोर्स अध्यापन गराइरहेको उनले बताए । उक्त कोर्स ४ वर्षे भएपछि भने रू. ४ लाख ५० हजार शुल्क लाग्छ । कलेजमा पूर्ण र आंशिक गरी २६ जना शिक्षक र प्रशासनतर्फ २० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
२२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त कलेजमा ५० हजार वर्गकिलोमिटरको आफ्नै पक्की भवन छ । उक्त भवनमा पाँचओटा प्रयोगात्मक ल्याब, एउटा कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, सभाहल, बास्केटबल कोर्ट, भलिबल कोर्ट, सुविधासम्पन्न रेष्टुराँलगायत रहेका छन् । अहिले बीएचएममा ९६ जना र प्लस टू म्यानेजमेण्टमा ९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । कलेजले विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास बढाउन तथा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गराउन भारत, मलेसिया दुबईलगायत मुलुक लैजाने गरेको कलेजका प्रिन्सिपल रामशैलेश विच्छाले बताए ।
बिहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने उक्त कलेजले विद्यार्थीहरूलाई चार घण्टा व्यावहारिक किसिमका कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको छ । कलेजले विगत ३ वर्षदेखि बीबीए र बीबीएबीआईका कक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । कलेजले पोखरा गैह्रापाटनमा भवन भाडामा लिएर यी कक्षाहरू सञ्चालन गरेको पालिखेले बताए । कलेजमा बीबीए र बीबीएबीआईमा गरी २ सय जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।